Benjamin Graham Quotes: Akanyanya kunaka makotesheni, biography uye kukosha kwekudyara | Ehupfumi Zvemari
Pakati pevatengesi vazhinji vanga vari munyika, mumwe wevakakurumbira ndiBenjamin Graham, akashaya muna 1976. Iyo inozivikanwawo sababa vekukosha kuisa mari, Uyu investor wechiChirungu aive mudzidzisi wevanhu vakuru vakaita saWarren Buffett kana Irving Kahn. Pasina kupokana, zvakataurwa naBenjamin Graham zvakakosha kuverenga, sezvo zviine huchenjeri hwemari hwakawanda.
Kunze kwemitsara yaBenjamin Graham, isu tichataurawo nezvekuti aive ani uye kukosha kwekudyara kwakadii. Zvese izvi chikamu chetsika yakajairika mune yezvemari nyika, saka ndinokuraira kuti urambe uchiverenga.
1 Aya gumi nemashanu akanakisa mitsara yaBenjamin Graham
2 Ndiani Benjamin Graham?
3 Koshesa kuisa mari
Aya gumi nemashanu akanakisa mitsara yaBenjamin Graham
Sezvatakambotaura, Benjamin Graham aive muzvinabhizimisi ane mukurumbira uye akadaidza baba vekodhi mari. Neichi chikonzero, zvakakodzera kuti uverenge mitsara mikuru yatakatisiirwa naBenjamin Graham. Tevere isu tichaona runyorwa rwegumi neshanu akanakisa:
"Vanhu vasingakwanise kudzora manzwiro avo havana kukodzera kuwana purofiti kuburikidza nekudyara."
"Chero ani anoita mari mumatokisi haafanire kunetseka zvakanyanya pamusoro pekuchinja kuri kuita mumitengo yezvokuchengetedza, nekuti munguva pfupi musika wemasheya unoita semuchina wekuvhota, asi nekufamba kwenguva unoita kunge chikero."
“Hausi kuzotaura chokwadi kana kukanganisa nekuti ruzhinji harubvumirani newe. "Unenge wataura chokwadi nekuti data rako nekufunga kwakarurama."
"Mbuya Musika ischizophrenic munguva pfupi asi anowana kudzikama mukati menguva refu."
“Musika wacho wakaita sedenderedzwa rinongogara richitenderera pakati petariro isina kumira mushe (izvo zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kudhura) nekusava netariro (izvo zvinoita kuti midziyo ive yakachipa kwazvo). "Smart investor munhu chaiye, anotengesa tariro uye anotenga vasina tariro."
"Kana iwe uchida kuve mupfumi, dzidza kwete chete kuti ungawana sei mari, asiwo maitiro ekudyara."
"Kurasikirwa kukuru kwevatengesi kunowanzobva pakutenga zvinhu zvemhando yepamusoro munguva dzakanaka dzehupfumi."
"Zvinoshamisa kuona kuti vangani vanamuzvinabhizimusi vane hunyanzvi vanoedza kushanda paWall Street, vachiregeredza zvese zvimiro zvehungwaru zvavakabudirira mumakambani avo."
"Kazhinji yenguva masheya ari pasi pekuchinja kusinganzwisisike uye kushanduka kwakanyanya mumitengo semhedzisiro yetsika yevanhu vazhinji vakadzika midzi mukufungidzira kana kubhejera ... kuti uwane nzira yeizvi unoda tariro, kutya uye kukara."
Kuwana zvinogutsa zviwanikwa zvekudyara zviri nyore kupfuura vanhu vazhinji vanofunga; kuwana mhedzisiro yepamusoro kwakanyanya kuoma kupfuura zvazvinonzwika. "
"Kunyange muzvinabhizimusi akangwara angangoda simba rakakura kuti arege kutevera ruzhinji."
"Chenjera nema projekiti, hazvina musoro kufunga kuti veruzhinji vanogona kuita mari kubva kumafungidziro emusika."
"Dambudziko guru remusimari, uye kunyange muvengi wake mukuru, pamwe ndiye."
"Kurasikirwa kunotyisa kunogara kuchiuya mushure mekunge mutengi akanganwa kubvunza kuti zvakadii."
"Pane mitemo miviri yekudyara: Yekutanga usarase, uye yechipiri, usambokanganwa mutemo wekutanga."
Ndiani Benjamin Graham?
Musi waMay 9, 1894, Benjamin Graham akaberekerwa muLondon, uyo nhasi anozivikanwa sababa vekosha yekudyara mari uye akashaya musi waGunyana 21, 1976. Kunze kwekuve investor, Graham akashandawo sepurofesa mu "Columbia Bhizinesi Chikoro "uye akanyora mabhuku maviri ezvemari:" Security Analysis "uye" The Intelligent Investor. " Ose ari maviri anotariswa nevazhinji kuve akanakisa emabhuku emari.
KuColumbia Bhizinesi Chikoro, Benjamin Graham akatanga kudzidzisa nzira nyowani yekudyara inonzi "value investing." Kusvikira zuva ranhasi ichiri imwe yenzira dzinonyanya kushandiswa uye dzakakurudzirwa nenyanzvi dzeupfumi. Pakati pevadzidzi vababa vemari yekudyara kwakakosha vanhu vane mukurumbira saWarren Buffett, Irving Kahn, Walter J. Schloss kana Jean Marie Eveillard.
Nepo dzidziso dzake pakukosha kwekudyara dzakatanga mu1928, pakanga pasati patsikiswa bhuku rake "Security Analysis" paakatsanangura izwi rekuti "value investing." Iri bhuku rakanyorwa naDavid Dodd, muAmerican investor. Mubhuku "The Intelligent Investor", Graham atozvitaura pamusoro pekukosha kwemahombekombe ezvekuchengetedza ayo kudyara mukukosha kwaanopa.
Kunze kwekuzivikanwa sekuti baba vekukosha kuisa mari, Benjamin Graham anozivikanwawo se baba ve stock stockism. Simba raaive naro kuvadzidzi vake raive rekuti vaviri vavo vakatumidza vana vavo zita rake. Warren Buffett akatumidza mwanakomana wake Howard Graham Buffett uye Irving Kahn akatumidza mwanakomana wake Thomas Graham Kahn. Muchokwadi, Buffett akabvuma pane dzinoverengeka kuti Benjamin Graham ndiye munhu aive auya kuzomukurudzira zvakanyanya, mushure mekwababa vake.
Koshesa kuisa mari
Iyo inozivikanwawo sekukosha kwekudyara, kukosha kwekudyara ifilosofi yekudyara ine mashandiro ayo zvinoenderana nekutora kwekuchengetedza pamutengo wakaderera. Kana tikabvisa mutengo wemusika kubva kune kukosha kwechitoro chakatengwa, tinowana mwero wekuchengetedza uyo musimboti unofanirwa kupihwa patinoisa kukosha.
Kazhinji, kukoshesa varimi, vakaita saBenjamin Graham, funga kuti mutengo wemusika unowedzera mune ramangwana kana uri pazasi pekukosha kwechitoro. Icho chinhu chinowanzoitika kana musika wachinja. Zvisinei, kukoshesa kuisa mari Iine matambudziko makuru maviri. Tinofanira kufungidzira nemazvo kuti mutengo wekunze ungave chii uye tofanotaura zvakanyanya sezvinobvira kana kukosha uku kuchizoratidzwa mumusika.
Kune vatengesi vazhinji vakave vakakurumbira uye vakapfuma kuburikidza nemaitiro akasiyana. Mumwe nemumwe ane zvaakasangana nazvo, maitiro avo nemazano avo. Nemitsara yaBenjamin Graham ndinovimba ndakubatsira uye nekukurudzira iwe kuti uise mari mumusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Benjamin Graham Quotes